फुटेर होइन जुटेर लाग्नको लागि सकारात्मक सोचको आवश्यक छ – Rangin Sansar Nepal Entertainment Portal
फुटेर होइन जुटेर लाग्नको लागि सकारात्मक सोचको आवश्यक छ
हामी केही सिप, रोजगारी र अध्ययनको शिलशिलामा बिदेशमा आएका छौ । यहाँबाट राम्रो सिप सिकेर आफ्नो जन्मभूमिमा केही परिवर्तन गर्न सक्छौ । यहाँको प्रविधि र बिकाश निर्माणको कार्य लगाएत टोकियो जस्तो भीडभाड शहरमा पनि जापानि नागरिकहरूको अनुशासन र लगनशिलता हामीले सिक्नुपर्छ र सिक्ने क्रममा पनि छौ । तर यही ठाउमा हामी कतिपय बिभिन्न बहानामा बिखन्डन बन्न पुगेका छौ । सही र गलत छुट्याउन नसक्नेगरी बिभाजित बनिरहेका छौ । हामी सबै नेपाली हौ र हामीलाई हाम्रो जन्मभूमि प्यारो लाग्छ, हामी सबैले चाहेमा हामी कुनैपनि नेपालीलाई आईपर्नै समस्या मिलेर समाधान गर्न सक्छौ । त्यसैले हामी फुटेर होईन हामी जुटेर अगाडी बढौ ।
कुनै पनि व्यक्ती समाजसेवा गर्नकै निम्ति बिदेश आएको छैन । समस्याहरू जो कोहीलाई पर्न सक्छ, त्यसको समस्या समाधानको निम्ति हामी सबैले आफ्नो रोजगारी, ब्यवसाय गर्दै त्यो बाहेक बचेको समय समाजलाई खर्चने गर्दछौ । बिभिन्न समस्याहरूमा सबै समाज र त्यसको अग्रजहरू मिलेर समाधान गर्न सक्छौ । समय खर्च गरेर लागिरहेका हुन्छौ र सक्ने सहयोग विदेश होस या नेपालका लागी गरिरहेका हुन्छौ । त्यो नै हाम्रो मानवता हो, त्यसमा आत्म सन्तुष्टि पनि पाईरहेका छौ तर धेरै अवसर गुमाईरहेका पनि छौ ।
कतिपय हामी सधै बिरोधको भाषा प्रयोग गरेर सामाजिक संजालमा बिभिन्न टिकाटिप्पणी गरी यो र त्यो भनि हामी नेपालीलाई बिभाजित गर्छौ । के समस्याको समाधान यही हो त ?
देश र कुनैपनि समाज बनाउने जिम्मेवारी तपाई हाम्रो पनि हो । आउनुहोस समय दिएर अरूलेभन्दा राम्रो गर्ने कोशिस गरौ, अन्याय नगरौ “बलले भन्दा बुद्धी” ले समाज परिवर्तनमा एक ईट्टा थप्ने कोसिस गरौ, सक्छौ । अाफै लागेर काम गरौ, जिम्मेवारी तपाई हाम्रो पनि हो !
नत्र सधैभरि अरूको बिरोध र नकारात्मक कुराले स्वच्छ र स्वस्थ समाज निर्माण हुन सक्दैन । राम्रो कामलाई विरोधी या जो सुकैले गरुन् उस्लाई सपोट गर्नै बानी बसालौ । आजको सही निर्णय र सकारात्मक सोचले नै भोलिको “स्वच्छ समाज र सम्ब्रिद्ध नेपाल निर्माण” हुन सक्छ। सक्छौ सपोट गरौ नत्र बिरोध हैन आफै लागेर सकारात्मक बनाउने कोशिष गरौ । जय देश ।
(लेखक स्याङ्ग्जा समाज जापानका निवर्तमान अध्यक्ष तथा NRNA जापानका कार्यसमिति सदस्य हुन् )
गायिका लक्ष्मी मल्लको सेल्फी -३ “तीजको दर” सार्वजनिक